Home » Entries posted by Shiil
Stories written by Shiil
Madaxweynaha Kenya oo qaaday xayiraadii safarka, Bandowgana muddo ku kordhiyay
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shaaca ka qaaday in la qaaday xayiraaddii dhanka safarka ee saarneyd magaalooyinka Nairobi, Mombasa iyo Mandheera laga bilaabo berito.
Wuxuu sidoo kale madaxweynaha sheegay in muddo 30 maalm…
Comments Off on Madaxweynaha Kenya oo qaaday xayiraadii safarka, Bandowgana muddo ku kordhiyay
Madaxda dowlad Goboledyada oo isla gartay shir gaar inay ku yeeshaan Galmudug
Madaxda Maamul Goboledyada dalka ka jira ayaa waxa ay ku balameen inay shir gaar ah ku yeeshaan magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug, kadib wada hadal dhanka Internetka oo ay yeesheen.
Warmurtiyeed ka soo baxay wad…
Comments Off on Madaxda dowlad Goboledyada oo isla gartay shir gaar inay ku yeeshaan Galmudug
R.W Khayre & Safiirka Midowga Yurub oo ka wada hadlay doorashada Somaliya
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa kulan la qaatay Safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya Nicolas Berlanga.
Kulanka u dhexeeyay Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo Nicolas Ber…
Comments Off on R.W Khayre & Safiirka Midowga Yurub oo ka wada hadlay doorashada Somaliya
Weerar Khasaare gaystay oo ka dhacay Gobolka Sh/dhexe
Wararka inaga soo gaaraya Gobolka Shabellaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay weerar gaystay Khasaare oo lala eegtay Ciidamada dowladda.
Gaadiid ay wateen Ciidamada Dowladda oo ka ambabaxay Magaalada Muqdish…
Comments Off on Weerar Khasaare gaystay oo ka dhacay Gobolka Sh/dhexe
Wasiirka Amniga gudaha ee maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa tababar u furay askar ka mid noqoneyso Ciidamada Daraawiishta Galmudug, kuwaas oo lagu xareeyey xerada Dhaan Karoone ee duleedka degmada Gelinsoor.
Comments Off on Galmudug oo Ciidamo cusub tababar u furtay
Maydka gabar la gowracay oo laga helay deegaan ka tirsan Gobolka Galgaduud
Wararka laga helaayo deegaano ka tirsan Gobolka Galgaduud ee Bartamaha Somaliya , ayaa sheegaya in la helay maydka gabar la waysanaa muddo laba todobaad ah.
Maydka gabadhaan yar ayaa waxaa laga helay deegaanka Cayn oo qiyaastii 1…
Comments Off on Maydka gabar la gowracay oo laga helay deegaan ka tirsan Gobolka Galgaduud
Muxuu ku saabsan yahay Ajandaha kulanka maanta ee Baarlamaanka?
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Maanta oo Isniin ah waxaa lagu wadaa in mid ka mid ah Kulamadooda caadiga ah ay ku yeeshaan Xarunta Villa Hargeysa ee Magaalada Muqdisho.
Ajandayaasha Kulanka Maanta …
Comments Off on Muxuu ku saabsan yahay Ajandaha kulanka maanta ee Baarlamaanka?
Villa Somaliya oo ka hadashay baaqashada shirkii Farmaajo & Dowlad Goboledyada
Madaxtooyadda Villa Somaliya ayaa waxa ay ka hadashay Shirkii maanta balanta aheyd inuu qabsoomo ee u dhaxeeyay Madaxweynaha Somaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo & Madaxda Maamul Goboledyada dalka ka jira.
Comments Off on Villa Somaliya oo ka hadashay baaqashada shirkii Farmaajo & Dowlad Goboledyada
Shabaab oo dilay Xildhibaankii ay afduubteen
Ilo wareedyo rasmi ah ayaa Dhacdo.com u xaqiijiyay in Ururka Shabaab ay durba toogteen Xildhibaan ka tirsanaa Baarlamaanka Maamulka Hirshabelle oo saaka ay ka qafaasheen wadada isku xirta Jowhar & Muqdisho.
Xildhibaankan oo m…
Comments Off on Shabaab oo dilay Xildhibaankii ay afduubteen
Dowladda Somaliya oo si rasmi u furtay duulimaadyada gudaha
Dowladda Somaliya ayaa maanta si rasmi ah u furtay duulimaadyada gudaha Somaliya oo xirnaayeen bilihii la soi dhaafay, kadib saameyntii ka dhalatay Cudurka Covid-19.
Munaasabad kooban oo lagu qabtay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cad…
Comments Off on Dowladda Somaliya oo si rasmi u furtay duulimaadyada gudaha